IZulu Blues – The Ulwazi Programme
Ngezingoma ezikhuluma ngendaba yokuphila komuntu, usizi lwakhe, amaphupho akhe, umculo kamaskandi akumangazi ukuthi ubizwe ngokuthi i- ‘Zulu Blues’. Uhlukaniswe ngesitayela esikhethiwe sesigingci nezinkondlo zokudumisa zesiZulu ezikhulunywa ngokushesha, umculo kamaskandi uhlukile eNingizimu Afrika.
Kodwa lokho akusho ukuthi awukozelwa umhlaba wonke – uZibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, wathola i-Living Living Legends Award ka-2014 yoMculo Nezokuzijabulisa phecelezi i-Music and Entertainment, udlale kwizethameli ezikude njengase-Denmark nase-Japan! Ngaphandle kwale mpumelelo yomhlaba wonke, uPhuzekhemisi ukhetha ukuhlala eduze nasekhaya eMkhomazi, futhi uthintana kakhulu nezimpande zakhe. Ekhulunywa kuzo zonke izingqinamba, igama lakhe lesiteji lihumusha ngokuthi ‘phuza umuthi’, ireferensi yamaqiniso angajabulisi kwesinye isikhathi aqukethwe emsebenzini wakhe.
Categories People Tags Living Legend, Phuzekhemisi, Zulu Blues